Afaka Mahita ny mazava? Ihany miaraka amin'ny Right Lens! - 2019 Kat Show News amin'ny fandaharan'ny Beat. Official mpandefa vaovao ny Kat Show, Mpanao ny DIEM Show LIVE
Home » Content Creation » Afaka Mahita ny mazava? Ihany miaraka amin'ny Right Lens!
Afaka Mahita ny mazava? Ihany miaraka amin'ny Right Lens!
Layard family (aka The Nimrud Lens)
Ny tranainy indrindra family artifisialy hita hatreto, dia ny Layard Lens (aka: "Ny Nimrud Lens"); dia hita avy AH Layard in 1853 ary manodidina 3000 taona (momba ny 750BC-710BC ao amin'ny Neo-Fanjakana Asyrianina). Tsy hita tao Kalhu, ny Tiglato-pilesera ny mpanjaka fonenana tanàna (amin'ny andro maoderina, izany no
Nimrud in Irak) ao amin'ny Lapan'ny West Avaratra. Ny postulated no nahita azy io dia nampiasaina ho toy ny fahiny lopy sy / na hanomboka afo kely. Amin'izao fotoana izao, dia aseho ao amin'ny British Museum; ny mpiandraikitra dia tsy dia azo antoka momba ny Lanyards 'fanombanana ny artifact, na izany aza, ary mieritreritra fa mety fotsiny no natao ho ravaka. Fanahy iniana na tsia, na izany aza, dia is ny family sira mbola mampino hiteny ratsy.
Raha nanana Latina amin'ny lise na oniversite, dia mety ho efa tonga saina fa ny teny hoe "family" dia teny amin'ny "Lentil"
A tokana Lentil Bean (Mariho ny convex protrusion)
(Ny tsaramaso dia roa convex endrika). Fahiny grika, romanina, ejipsianina sy ny andinin-teny rehetra hanonona "solomaso mirehitra" sy "fanandratana solomaso." Ny soratra voalohany manonona izay (mety) ny fanitsiana family an'ny Emperora Néron.
Niantsambotra nandroso ny arivo taona mahery, isika dia mahita porofo be dia be ao Moyen Âge Eoropa ny mikraoskaopy, telescopes, ary ny fampisehoana. Raha niresaka momba izay: no nandre momba ny optometrist izay latsaka an-family grinder ka natao ho fizàhan'izao ny tenany? Miala tsiny, tsy afaka fotsiny aho jereo fomba alalan'i ity lohahevitra ity tsy hanangana izany chestnut taloha. Corniness voky, dia afaka mihetsika eo izao.
Tsy mandra-1733, na izany aza, fa ny manaraka amin'ny onjam-breakthroughs Mitovy amin'ilay family mbola niseho; izany rehefa namorona Chester Hall Moore ny achromatic iombonana amin'ny family tany Angletera. izy
Peter Dollond ny apochromat family (ampiasaina amin'ny telescopes)
tsy nahavita astringently hanenjika ny foto-kevitra, na izany aza, izay nitarika ho amin'ny rojo ny zava-nitranga dia nahita ny fahitana patented tao 1758 amin'ny hafa optician avokoa: John Dollond. By 1763, Peter Dollard (zanak'i Jaona) dia namorona ny fanatsarana ny famoronana izay niantso ny apochromat.
Ny zavatra lehibe manaraka ao amin'ny mazava izay nitranga ny fivoaran'ny ankehitriny kevitra mazava; mpahay siansa maro, dokotera, fizika, mpamoron-tsain, ary mpahay matematika natao anjara amin'ny fanandramana sy ny fanombantombanana. Indrindra indrindra, Thomas Young (Angletera) & AJ Fresnel (France), fampandrosoana ahevaheva teorian'ny ny mazava. James Clerk Maxwell (Scottish), ny herinaratra teoria ny mazava ao 1864, niaraka fa ny asany voalohany indrindra teo amin'ny loko sary manodidina izany fotoana izany (Vita 1860 ny). Max Planck (Germany) sy ny atsangana hitondra teoria in 1900 nanampy manazava mazava; Albert Einstein (United States farany) in 1905 koa Planck kokoa ny famaritana ny mazava, nitondra antsika ny Photon.
Dual 1.5inch Monopulse Gaussian Lens ny hazavana avy Dehron.com
fandrosoan'ny atsangana hitondra haihetsika nanazava zavatra maro momba ny fahazavana amin'ny 1935.
Miaraka rehetra ny tena mamiratra ny olona miasa eo amin'ny mazava kevitra, zava-dehibe ny tsy hanadino ny hafa mamirapiratra saina miasa mivantana amin'ny Mitovy amin'ilay family mbola. Carl Friedrich Gauss, alemà mpahay matematika, nandray anjara be dia be ho an'ny maoderina family, ary ny fahazavan-tsaina ny amin'ny fampiasana. ny Dioptrische Untersuchungen Nampianatra antsika ny, anisan'izany ny totohondry famakafakana ny sary fananganana amin'ny Gaussian ny hazavana.
Fa manaraka 100 taona, fara fahakeliny, ny asany nanampy hitarika mahomby family crafting, indrindra fa ny fanazavana ny dimy lehibe quirks in Mitovy amin'ilay family mbola (astigmatism, nahatsiaro tena, nanova, saha Petzval curvature, ary boribory).
Raha ireo teny no ampiharina ny Mitovy amin'ilay family mbola ny maso, dia ampiasaina eo amin'ny sehatry ny ny hazavana, ary azo antoka fa ao amin'ny zavatra izay mitaky family avy mbola (sary) fakantsary ny solomaso - izay mitondra antsika ho any amin'ny Mitovy amin'ilay family mbola ampiasaina ankehitriny ao amin'ny niomerika lahatsary fakan-tsary nampiasain'ny nandefa toby sy matihanina hafa tany an-tsaha.
Tsy mahagaga, Canon manana be dia be ny hanaterana izany ao amin'ny sampan-draharahan'ny family. Ny CN-E14.5-60mm T2.6 L SP (amin'ny PL tendrombohitra OR EF tendrombohitra) dia manome manan-tsahala ny sakany zoro fandrakofam-baovao. Tamin'ny 4.1x Zoom family ao amin'ny Super 35mm endrika, dia ho hoatr'izany fahavitan'izany asa nokaliana optic output indrindra. Canon zatra mihaona na mihoatra ny farany ambony-indostrian'ny fitsipika. Quality foana hanambady ny mahasoa miaraka amin'ny Canon vokatra; fanaraha-maso ny vava vola aminy, manampy foana ny marina amin'ny Torque fanoherana izany family sy amin'ny indray ny flange fanitsiana rafitra mahafeno ny mpampiasa ny cinematic ilain'ny. Mahatalanjona io 4K family manana aspherical lehibe family-singa sy ny fluorite izay manampy mandranitra ny zoomed sary. Noho ny tsara tarehy injeniera, tsy mifantoka afa-tsy mitaky fiovana zara. Ny iraika ambin'ny folo vary nisara-toerana indray dia manapariaka maranitra manome fahafahana diaphragm fifantohana.
Hafa azo antoka voa ho an'ny Canon dia ny CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP (amin'ny PL tendrombohitra OR EF tendrombohitra) - ny ambony ka hiady amin'ny Super 35mm endrika amin'ny fampihebana manan-tsahala sy ny Telephoto zaridaina lavany. Maro ny endri-javatra azo ampiharina amin'ny Canon'S avo-end Mitovy amin'ilay family mbola mahita ny lalana ho ankamaroan'ny Optical ny fitaovana; toy ny teo aloha family izany, koa, dia manana marika mazava eo amin'ny lafiny roa amin'ny zorony faritra mba hahafahan'ny aina ny fampiasana na dia avy amin'ny lafiny mifanohitra. Canon injeniera ny maka ny mpanjifa HD zavatra andrasana ho zava-dehibe. Fandringanana-tsisin'ny famolavolana ao amin'ny fitaratra compensates fanorenana ny fanitarana sy ny Contraction, rectifying tontolo iainana-mianatra fahadisoana eo amin'ny marika.
Schneider-Kreuznach Group ny Cine-Xenar III (Set enina) family Set
Ny Schneider-Kreuznach Group ny fankatoavana ny fifantenana ny ambony-fiaramanidina Mitovy amin'ilay family mbola misy ny Cine–Xenar III (napetraka ny enina) Prime Lenses. Ny tsara hoatr'izany endrika dia mikendry manokana ny tsara indrindra amin'ny cinematography sy lahatsary fakan-tsary. Mafy orina, miaraka amin'ny optimum telecentric Optical endrika, ny bokeh vokany mahagaga sy ny Cine–Xenar III manana andro fifadian-kanina T-mijanona (rehefa mety manantena ao amin'ny tena nankafizin'ny olona tsipika ny Mitovy amin'ilay family mbola). Tsy mahagaga ihany koa takatry, mandinika ny toetra tsara tarehy.
Sony SCL PK6 / F CineAlta 4K Lens maika
Sony'S fandraisana anjara ho an'ny avo-family farany lineup tariny iray hafa ny 6 Mitovy amin'ilay family mbola. Ny SCLPK6 / F CineAlta 4K Lens dia ahitana fitaovana 20mm / 25mm / 35mm / 50mm / 85mm sy 135mm Mitovy amin'ilay family mbola. Ny tena tsara mifanaraka amin'ny fakan-tsary miaraka amin'ny Arri PL rafitra an-tendrombohitra, dia 4K ny Mitovy amin'ilay family mbola afaka amin'ny feno-fanamboarana vy sy iray-aspherical singa. Ankoatra ny maha T2 mifanentana, ny tsirairay dia samy manana 9-bladed Iris. Sharp na malefaka, Sony mahazo ny sary marina.
Red Digital Cinema manana plethora ny Mitovy amin'ilay family mbola noho ny fampiasana cinematic. Ny sasany vao haingana sy ny ho avy tsehatra asa izay nampiasa ny sasany Mena Lenses ahitana: Ny Hobbit Trilogy, Annabelle, Avengers: Vanim-potoan'i Ultron, Enders Game, Pompéi, Elysium, 300 Mitsangàna ny Fanjakana, & Transformers: Age ho lany tamingana, ny anarany fotsiny 10 sarimihetsika. Red manao ny hafa family mpamokatra ambony aza, ary manao izany izy ireo mba hahazoana ampy tsara ny toerana ambony.
Panavision ny Primo Praiminisitra Lenses dia lalao changer; mihitsy aza izy ireo efa nahavita hahazoana vitsivitsy Academy Awards. Famoriam-bola io dia ambony-talantalana zavatra; izy ireo
Panavision ny Primo Prime Lenses
mamokatra jiro sy tanteraka aza miray volo fampifangaroana ny mampiasa sary hafa Primo family. Ghosting, nanova, ary veiling Mamirapiratra mankarary maso izany dia mora quelled ny Primo Prime Lenses; dia mety tsara ho an'ny fakan-tsary nomerika sy ny sarimihetsika. Focal lavany avy any 10 tandavan mba 150 Millimeters sy Mitovy amin'ilay family mbola misy ireo dia mifanaraka amin'ny 1.4x Primo Extender, izay hanafoana feno nijanona ny hatsiaka. Miaraka amin'ny tsara Primo family sy ny toe-javatra mety, dia afaka hifantoka na dia latsaky ny 2 santimetatra avy eo anoloan'ny ny family.
The Primo Classic Series ny Praiminisitra ny Panavision Lenses mora mamela ny fifantenana mahazatra kokoa eo amin'ny fifantohana malefaka (amin'ny mizana ny Adjustable tandavan) sy avo-mifanohitra fampisehoana. Tonga lafatra foana ny lalao hafa Mitovy amin'ilay family mbola voalohany ny lokony sy ny ilàna, akaikin'ny-macro mifantoka azo atao ao amin'ny toe-piainana tsara; tsirairay ihany koa dia afaka handraisana ny gel aoriana sivana (Sokiro eo). Mitovy amin'ilay family mbola ireo miainga amin'ny 21 millimeters ny 125 millimeters. Lova navelan'i Panavision fitaratra teti-dratsy (nohatsaraina) fahasoavana ny 21, 27, 35, 50, ary 100 milimetatra Mitovy amin'ilay family mbola ao izany vokatra tsipika; rehetra dia dimy ho an'ny T1.9 hafainganam-pandeha. Habeny 24, 30, 65, 85, ary 125 milimetatra ary useable amin'ny T1.7 na T1.8 hafainganam-pandeha ary afaka zatra amin'ny maranitra ho malefaka ifantohana ao anatin'ny ny voatifitra. Cam fiara rafitra rehetra nitatra mifantoka amin'ny zavatra rehetra any an-dafin'ny 3 tongony amin'ny akaiky-macro mifantoka. Ny 2 Mitovy amin'ilay family mbola lava indrindra ao amin'ny andian-dahatsoratra mahazatra (izany hoe ny 100 milimetatra, ary ny 125 milimetatra) ihany koa ny mampiasa Linear mitondra teknolojia.
Avy amin'ny Fahiny Fanjakana Asyrianina amin'ny andro ankehitriny ny alalan 'ny, dia miandalana Mitovy amin'ilay family mbola nisy ny fanatsarana sy fanampiana ny lalana izay hitantsika izao tontolo izao. Araka ny efa niseho teknolojia sary sy nandroso, Mitovy amin'ilay family mbola tsy nanampy anay tamin'ny mitantara ny fampandrosoana foana ho toy ny hazakazaka amin'ny sary mazava kokoa. Mitovy amin'ilay family mbola in telescopes dia afaka hitondra antsika ny kintana avy tany an-danitra, sy ny Mitovy amin'ilay family mbola eo amin 'ny fakan-tsary dia afaka manampy antsika hitondra ny kintana ho an'ny mpihaino.
Albert Einstein mirehitra solomaso Canon fakan-tsary nomerika lahatsary Dollond maso solomaso James Clerk Maxwell Layard Lens Lens fanandratana solomaso Max Planck ny hazavana Panasonic Photon Red Sony The Nimrud Lens video camera Young	2019-01-04